Sheekada Geed Seytuunka ugu Cimriga dheer Dhulka Falastiin. | HimiloNetwork
Posted by: Himilo in Sahanka, Wararka November 19, 2018	0 850 Views
RAMALLAH, West Bank (Himilonetwork) – Sheekada ku saabsan geed Seytuunka ugu cimriga dheer dhulka Falastiin oo la yiraahdo al-Badawi ayaa dad badan is-weydiinayaan goortuu curtay iyo inta uu sii jiri karo gu’ ahaan.
Previous: Da’yar Muslim ah oo u dhintay Badbaadinta Dib-jir cabsanaa oo Jidka Tareenka ku socday.
Next: 500,000 oo Danyar Shiinees ah oo Shaqooyin looga abuurayo Mashruuca Qaran ee Dhireynta iyo Ilaalinta Keymaha.
Muxajabad doonaysa inay fuusho Buurta ugu dheer Adduunka ee Mt Everest.